Chile dia firenena manana tantara manankarena sy miavaka, noho izany dia samihafa ny kolontsainy. Ny Shiliana dia samy hafa amin'ny fisokafana sy fahafahana mifaly na dia ao anatin'ny andro feno fahamaizinana indrindra aza, noho izany dia mamirifiry sy mahafinaritra foana ny fialantsiny. Misy fialantsasatry ny firenena 15 ao amin'ny firenena, ny sasany amin'izy ireo dia fivavahana, izay mijery tsy amim-pirahalahiana sy amin'ny fankatoavana ny fomban-drazana rehetra. Saingy ny ankamaroan'izy ireo dia sivily, izay manamarika ny zava-drehetra hatramin'ny kely ka hatramin'ny lehibe ary mandalo ny herisetra.
Ny ankamaroan'ny mponina ao Shily dia manambara ny Katolika, noho izany dia mankalaza ny fety lehibe indrindra ho an'ny katolika izy ireo.
Ny andron'i Petera sy i Paoly . Amin'izany andro izany, ny fivavahana dia natao, ary ny Katolika dia mifady hanina. Amin'ny ankapobeny, ireo fomba amam-panao ireo dia tsy hitan'ny olona izay mandeha mankany amin'ny tempoly.
Andron'ny Virjina Carmen, 16 Jolay . Ankehitriny dia mitabataba be ny androany any Chili, satria maherin'ny 200 arivo no miala ny tendrombohitra mankany amin'ny seranan-tsambo Tirana akaikin'ny tanànan'i Iquique . Eto no misy ny fetibe ara-pivavahana, natokana ho an'ny olo-malaza ao amin'ny firenena. Andro feno alahelo andro aman'alina eny amin'ny arabe vitsivitsy ao an-tanàna. Ny olona manao akanjom-pandihizana dia manao dihy ary asiana sakafo matsiro. Eto izy ireo dia mandamina asa kely. Fialan-tsasatra tena mahafinaritra izany ary zava-dehibe ny mahatsiaro fa ny zava-mitranga eto dia natokana ho an'i Virgo Carmen, noho izany dia avy am-po avokoa ny zavatra rehetra sy ny eritreritr'ireo mpandray anjara ary tena mahitsy fo.
Fiakaran'i Maria Virjiny, 15 aogositra . Amin'ity andro ity, ny Shiliana dia mitondra any amin'ireo fiangonana sy trano fiangonana ny voan'ny voaloboka voalohany. Ny ampitson'iny, dia misy asa fanompoana masina sy fampisehoana an-tsehatra. Amin'ny ankapobeny, ny fialan-tsasatra dia mahafinaritra be, na dia tsy dia misy dikany aza ny fenitra Shiliana.
Andro iraisam-pirenena ho an'ny fiangonana evanjelika sy protestanta, 31 Oktobra . Ny mpino, 20% -n'ny mponina, mankalaza azy ireo araka ny fomban'ny fiangonany, ny ankamaroan'ny mponina dia tsy mandray anjara amin'izany, fa tsy manameloka.
Ny fiheverana tsy manam-petra an'i Maria Virjiny, 8 Desambra . Androany dia tena manan-danja tokoa ho an'ny Ortodoksa, protestanta, katolika tranainy sy mpino antitra. Noho izany, ireo olona manana finoana samihafa dia mivory ho fanomezam-boninahitra ny fialan-tsasatra amin'ny ankamaroan'ny fiangonana ao amin'ny firenena.
Ny nahaterahan'i Kristy, 25 Desambra . Ny fiomanana amin'ny andro fialan-tsasatra dia manomboka ela be talohan'ny azy, hatramin'ny faran'ny volana Novambra. Mandritra ny efatra herinandro dia manatrika ny fiangonana ny Katolika, mivavaka, mamerina ny lamandy ao an-tokantranony ary manamboatra azy ireo. Ary mandray ihany koa fanomezana ho an'ny havan-tiany izy ireo. Ireo silamo tsy mpino dia tsy manao afa-tsy ny ampahany farany amin'ny fanomanana, ka any amin'ny toeram-pivarotana rehetra dia afaka mahita olona sambatra izay misafidy fanomezam-pahasoavana sy firavaka ho an'ny trano.
Fety sy fialan-tsasatra sivily
Taom-baovao ao Chile, dia ankalazaina amin'ny 1 Janoary, toy ny any amin'ny firenena sivily manerantany. Tamin'ity vanim-potoana ity dia nanana mpizahatany maro ny firenena. Firenena tena mahavariana i Chili fa ny taom-baovao dia afaka hita eto eto an-tendrombohitra na eny amin'ny moron-dranomasina ambanin'ny masoandro. Ny mponina indizeny dia tia mankalaza ny fasika volamena na eny an-dalambe ao an-drenivohitra.
Saingy misy faritra any Chili izay fankalazana ny Taom-baovao dia zavatra hafahafa kokoa noho izay mety eritreretina. Ao amin'ny tanànan'i Talca, nandritra ny 20 taona mahery , dia nisy ny fiangonan'ny fety iray natao tamin'ny 1 Janoary , ary avy eo izy ireo dia nankany amin'ny toeram-pandevenana. Nitsidika ny fasan'ireo olon-tiany ireo, olona, ​​tahaka ny, manampy amin'ny fanombohana ny taona vaovao amin'ny tontolo manaraka.
Ao amin'ny tanànan'i Marchive, ny taona vaovao dia tsy dia mahasosotra loatra. Voalohany, ankalazaina ny alin'ny 23 ka hatramin'ny 24 jona . Ny fianakaviana dia mivory manodidina ny afo ary manomboka "mankalaza", milaza tantara mahatsiravina momba ny havany na ny angano fianakaviana mahatsiravina. Aorian'io, ny fianakaviana manontolo dia mandeha any amin'ny dobo akaiky indrindra mba handroana. Efa efa zato taona izao io fomban-drazana io, hany ka azonao an-tsaina fotsiny hoe firy ny tantara lazaina manodidina ny afo, satria ireo razambentsika dia razambe izay niaina mihoatra ny roa na telo taona lasa izay. Tsy ny fianakaviana rehetra dia vonona ny hanasa vahiny tonga tsindraindray, fa tsy ny mpandeha rehetra no manaiky izany Taom-baovao toy izany.
Tamin'ny Febroary, nanao fihetsiketsehana mozika tao amin'ny tanànan'i Viña del Mar ireo Shiliana. Ity dia tanàna malaza, tanàna iray fanta-daza, angamba tafahoatra ny mpizahatany ary nahatonga io fetibe io ho mavitrika kokoa sy faly kokoa. Mandritra ny herinandro farany amin'ny volana, dia misy ny fampisehoana mozika manerana izao tontolo izao ao an-tanàna, ary tsy mahazatra anao ny mihaona ireo tarika malaza. Mandritra ny fetibe ny zavakanto dia misy fifaninanana maro ho an'ny ankizy sy ny olon-dehibe, izay manome fientanam-po ho an'ny mpanatrika.
Taorian'ny fetiben'ny mozika tany avaratry ny firenena, nisokatra ny Carnaval Andino Con la Fuersa del Sol . Mandritra ny telo andro, mandihy eny an-dalambe ireo mpandihy, mihira ary mahaliana indrindra ireo mpihira, manao akanjo volom-pirenena maro an'isa izy ireo: Espaniôla, Indianina, Peroviana ary Boliviana. Tena fahitana mahavariana sy mahafinaritra izany.
Fetibe tsy mahaliana no atao amin'ny volana Janoary any Santiago - "Santiago ho an'arivony" . Notokanana tamin'ny sehatry ny teatra sy ny "mpanompo mpankato" izy io. Indray mandeha isan-taona dia maro ireo mpikatroka, talen-tsekoly ary olona hafa ara-kolontsaina no tonga any an-drenivohitr'i Chile. Saingy amin'ity fialantsasatra ity dia misy mpilalao an-dalam-be sy mpilalao sarimihetsika mampiseho ny isany, noho ny fandresen'izy ireo sy ny fanajàn'ny vahoaka. Matetika ny mpanakanto an-dalambe no manomana ity hetsika ity mialohan'ny fanombohana, noho izany dia avo lenta foana ny fampisehoana azy ireo.
Tamin'ny volana Septambra, nankalaza ny Andro Independence ny Shiliana. Ny faha-18 , ny paradisa sy ny fampisehoana dia natao any amin'ny tanàna rehetra, ary amin'ny takariva fampirantiana, fetibe, concert et fairs. Amin'izao andro izao, nankalaza ihany koa ny Andron'ny Tafika, ny fialan-tsasatra roa dia tena zava-dehibe ho an'ny Shiliana, izany no mahatonga ny latabatra misy sakafo fikarakarana ao amin'ny trano tsirairay. Ny mpizahatany dia tokony ho vonona amin'ny zava-misy fa mandritra ny vanim-potoana dia manana andro fialantsasatra ofisialy ny mponina ao an-toerana, noho izany dia mihidy ny fivarotana rehetra.
Salady Herring ao an-trano
Ny toetran'ny 140 hatramin'ny 90 - inona no dikan'izany, ary ahoana no hampiato ny fivoaran'ny hypertension?
Cream-soup miaraka amin'ny chanterelle sy crème
Blaogera - votoatin'ny kaloria
Fanabeazana momba ny volo-tany ho an'ny ankizy any am-pianarana
Akanjo fitafy ho an'ny vehivavy matavy
Snyat - fomba fialana amin'ny tranonkala?
Ahoana ny fifidianana ski amin'ny ski?
Fanohanana ny fiantsonan'ny zavamaniry - ahoana no fomba hifidianana ny tetikasa tsara ho an'ny famolavolana ny tontolo iainana?
Sary tsy misy sary avy amin'ny alika bevohoka izay nanakoako ny Internet
Nahoana ianao no manao kofehy mena eo amin'ny tananao?
Inona no endrik'ilay rantsan-tongotra?